कर नतिरेको भन्दै बुधबारदेखि पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द - Everest Dainik - News from Nepal
कर नतिरेको भन्दै बुधबारदेखि पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द
पोखरा, फागुन २१ । पोखरा महानगरपालिकाले ‘कर नतिरेको’ भन्दै बुधबारदेखि प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्ने भएको छ । पोखराको आकाशमा दिनदिनै प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएकै बेला महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘हामीले बुधबार (फागुन २२ गते)देखि पोखरामा हुने सबै अवैध उडानहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं’, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले भने, ‘करको दायरामा नआउनेहरुले उडान भर्न पाउँदैनन् ।’ पोखरा महानगरको वडा नं. १८ मा पर्ने सराङकोट प्याराग्लाइडिङ उडानको प्रमुख थलो हो ।
याे पनि पढ्नुस पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिकः नेता केसी
पोखरा महानगरको नगर परिषदले आव २०७५–०७६ को लागि प्रत्येक प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट २५ हजार वार्षिक शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। यता, गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै वार्षिक एक लाख रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको थियो । प्रदेश सरकारले शुल्क उठाउने जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारलाई नै सुम्पेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैले तोकेको शुल्कको रकम करिब एक लाख ८६ हजार हुन आउँछ । आफूहरु दोहोरो शुल्कमा परेको भन्दै व्यवसायीहरुले कर तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । पोखरामा ६० भन्दा बढी प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले व्यावसायिक उडान भर्दै आएका छन् ।
पोखराको आकाशमा हुने अवैध उडानसँगै दुर्घटना बढेको समाचार नेपालखवरले प्रकाशित गरेलगत्तै महानगरले कर नतिर्नेहरुको उडान नै रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘महानगर र प्रदेश सरकारले तोकेको कर नतिर्नेहरुलाई हामी उडान भर्न दिंदैनौं’, वडाध्यक्ष थापाले भने– ‘दुर्घटनाप्रति पनि हाम्रो चासो रहेको छ ।’
रुसको हवाई खेल महासंघको नाममा यतिबेला पोखरामा ‘२०१९ हिमालयन कप’ भन्ने प्याराग्लाइडिङको प्रतियोगिता भइरहेको छ । सो प्रतियोगितामा भाग लिन रुसलगायत विभिन्न देशका करिब ३ सय पाइलटहरु पोखरामा छन् । उनीहरुले हवाई उड्डयन कार्यालयबाट उडानको स्वीकृति त लिएका छन् तर सो प्रतियोगिताबारे भने हवाई उड्डयन कार्यालय नै बेखवर छ । हवाई खेलकुद संस्था नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङ ग्लाइडिङ संघ ९ नेफा० का केही आधिकारिक व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा रुसका नागरिकले सो प्रतियोगिता आयोजना गरेका हुन्। २५ युरो प्रवेश शुल्क लिएर आयोजना गरिएको भनिएपनि सो प्रतियोगितामा सहभागीहरुसँग मोटो रकम असुल गरिएको समेत स्रोतले बताएको छ । नेपालखबरबाट
याे पनि पढ्नुस विकास बाहेक कुनै सपना छैन– अधिकारी